VIDEO+SAWIRO+COD: Saraakiil u dhalatey Somaliland oo uu soo goostey Buuhoodle – SBC
VIDEO+SAWIRO+COD: Saraakiil u dhalatey Somaliland oo uu soo goostey Buuhoodle
Laba sarkaal oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland una dhashay qabiilka Habar-Awal ee beelaha Isaaq oo wata gaari nooca dagaalka ah ayaa maalinimadii shaley soo gaarey degmada Buuhoodle ee xarunta Gobolka Cayn, kuwaasi oo ka soo goostey ciidamada maamulka Somaliland.
Saraakiishan ayaa xiriir ay la soo sameeyeen saraakiisha maamulka Khaatumo State of Somalia waxaa u suuragashay inay soo goostaan waxaana si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Buuhoodle iyadoo looga hortagey banaanka magaalada, iyadoo markii ay soo galeen gudaha magaalada la geeyey xarunta madaxtooyada maamulka Khaatumo ee Buuhoodle halkaasi oo ay kulamo kula yeesheen hogaamiyeyaasha maamulkaasi.
Saraakiishan oo saxaafada la hadley ayaa sheegay in sababaha ugu waa weyn ee ay uga soo goosteen maamulka Somaliland ay tahay iyagoo cadaalad xumada maamulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Siilaanyo isla markaana qabiilada qaar lagu laynayo kuwa hoosta la gashanayo, iyagoo sheegay in cadaalad xumadaasi darteed ay si madaxbanaan uga soo tageen dhinaca Somaliland.
Sidoo kale waxay sheegeen inay aad uga caroodeen oo ay siin wayday in ciidamadii qaranka loo adeegsadey dan reer , taasii oo aan aheyn mabda’a ay wateen markii hore sida ay hadalka ay u dhigeen.
DHAGEYSO CODKA SARKAALKA SOO GOOSTEY
HALKAN KA DAAWO VIDEO SOO DHAWEYNTII GAARIGA & SARAAKIISHA SOO GOOSATEY
maamulka siilaanyo gabalkiisa ayaa sii dhacaya iminka waxaa bilaabatay in isaaqi gaadiidki dagalka la soo baxsadaan . waan soo dhawaynaynaaaa
asc waa arin cajiib ah 18sano kadib in uu xaal sidaan ku dambeyo ogaada qof walboo somali ah in uusan qabiil qaran noqon karin ay aakhirkana u dambeenayso sidaan iyo waliba si kaxun maamulka somaliland waxay ka waligoo sheegi jireen dadkana ka gadi jireen in dowladii kacaanka laysay kuna laysay magac dowladnimoc maanta waxay kalshaale kasameenayso oo magac dowladeed ku laynayso dad shacab ah ha ogaato in lagula xisaabtami doo gooray ahaataba hana ogaadaan in aysan waligood somalia ka go`ayn qabiilada daga somaliland na ha ogaadaaan in ay xor yihiin aysan ku qasbi karin in ay noqdaan somali diid waxaan leeyahay kuwa ciidanka iskushegaya oo shacabka lagu laynayo in ay kasoo baxaan dambiga lagalinayo cadeestaana si ragaan oo kale damiirkooda iyo wadaninimadoo ragaanba waxay u adkeesan wayeen sida wax usocdaan oo damiir la aanta ah ogaadana in ay somali somalia tahay guuuuuuuuuuuuuuuuul somalia viva somalia
REER KHAATUMO WAR REER KOONFUR IYAGAA IS CUNAA YEE SOMALILACN AYAA DANTA IDINKU JIRTA EE EDEB LAHAADA HADHOW AYAAD KA SHILAANDOONTAANE SOMALILADN AQOONSIGEEDA WAX YAR AYAA U DHIMAN EE HALAGA FIIRSADO REER KOONFUR WAXAA IDIKA WANAAGSAN SOMALILAND LASOCO ANIGA WAXAAN AHAY NIN REER KOONFUR AH GUUL SOMALILAND